Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Taageerada fayoqabka ee shaqaalaha
Waxaan hubaal ku nool nahay waqtiyo aan horay loo arag. Dhibaatooyinku way u tarmeen si aan hore loo arag oo shaqaalaha Dugsiga Degmada Minnetonka shaki la'aan hadda waxay leeyihiin culeysyo dheeri ah oo kaga imanaya guriga, shaqada iyo bulshada weyn ee dusha saareysa. Mararka qaar, inaad yeelato garab aad ku tiirsato ayaa kaa caawin kara inaad ku dhex socoto dhammaan dhibaatooyinkaas! Fadlan ogow in Degmadu ay bixiso xoogaa ilaha muhiimka ah xilliyada aad u baahan tahay:
Qorshaha Kaalmada Shaqaalaha - Dhammaan shaqaalaha, ha ahaadaan kuwo buuxa ama waqti-dhiman waxay ka faa'iideysan karaan la-talin iyo adeegyo kale iyada oo loo marayo bixiyahayaga, VITAL WorkLife. Adeegyada VITAL waxaa ka mid ah saddex kulan oo la-talin ah oo aan kharash lahayn shaqaalahooduna waxay shaqaalaha degmada u gudbin doonaan xirfad-yaqaanno kale oo ku jira caymiskooda caafimaad.
Barnaamijka Caymiska Caafimaadka - Shaqaalaha qaata xulashooyinka caymiska caafimaadka ee Degmada waxay raadsan karaan la-talin iyo kaalmo kale iyada oo loo marayo HealthPartners. HealthPartners waxay leedahay koox heegan ah oo ka caawisa dadka ka shaqeynaya su'aalaha caafimaadka habdhaqanka adag. Navigators-keeda Caafimaadka Dabeecadda waxaa lagu gaari karaa 1- (888) -638-8787.
Kharashka ku baxa booqashooyinka la-taliyayaasha caymiska ayaa kala duwan, waxayna kuxirantahay xirmada caafimaadka aad dooratay. Wada-caymiska iyo / ama booqashada-wada-bixinta ayaa la codsan karaa. Xaddid malahan tirada booqashooyinka aad u baahan karto.
Haddii aadan ahayn kaqeybgale Caymiska Caafimaadka Dugsiyada Minnetonka, laakiin aad kujirto meel kale, waxaad ubaahantahay inaad kuhesho faa iidooyin lamid ah qorshahaaga. Fadlan la tasho maamulaha qorshahaaga si aad wax badan uga ogaato.
Kheyraadka fayoobaanta - Waxaa jira liis macluumaad ballaaran oo loogu talagalay qoysaska Degmooyinka bogagga Adeegyada Taakulaynta Ardayda, shaqaaluhuna way ka faa'iidi karaan macluumaadkan, sidoo kale.